Imaara otu ndi Australia si ekele onwe ha | Njem zuru oke
Isabel | 16/04/2021 11:15 | Emelitere ka 16/04/2021 12:15 | Australia
Ọ bụrụ n ’ezumike gị ọzọ ịchọrọ ịga njem na Australia ma ọ bụ chọọ ịga ọmụmụ ihe na mba a, otu n’ime akụkụ ndị ị kwesịrị ịma iji mee ka ndụ gị gbanwee ngwa ngwa enwere omenala ya na omume kwa ụbọchị.
Maka ụfọdụ ndị bi na mba ọhụrụ nwere ike bute ọgbaaghara ọdịbendị, tụmadị ka obodo ọhụrụ ha mara ha ahụ. Ibi ibi n’otu obodo dịka Ọstrelia nwere ọtụtụ ihe ị ga - eme, nke ga - enyere gị aka imeghari ozigbo ma nwee mmetụta dịka azụ dị na mmiri.
Na kọntaktị mbụ gị na ndị nwe ala, ma jụọ maka ntụzịaka ma ọ bụ ụdị ozi, ị ga-ekele ha ma webata onwe gị n'ụzọ dabara adaba. Maka nke a, n’isiokwu a anyị ga-amata etu ndị Ọstrelia si ekele ibe ha.
1 Kedu ka ndị Australia dị?
2 Kedu ka esi ekele ke Australia?
3 Kedu usoro eji eji ekele Australia?
4 Olee otú ihe ngosi dị?
5 Kedu ka ndị Australia si ekele ibe ha na nnọkọ oriri na ọ ?ụ ?ụ?
6 Otherzọ ndị ọzọ ị ga-eji kelee mba Commonwealth
Kedu ka ndị Australia dị?
A makwaara dị ka "Aussies", ndị Australia na-abụkarị ndị na-asọpụrụ onwe ha, ndị nwere ezi obi, ndị na-atọ ọchị na ndị na-ezighi ezi n'ihe ha na-eme. Ha na-enwe ọmarịcha ọkwa agụmakwụkwọ, nke sụgharịrị ka ọ nwee ohere ọrụ zuru oke yana ibi ndụ dị elu. A gosipụtara nke ikpeazụ na omume enyi ha, imeghe ma zuru ike.
Ndị Australia bụ ndị dị mfe ndị ji mbọ na ịrụsi ọrụ ike akpọrọ ihe, na-enweghị ọdịiche dị n'etiti klaasị mmekọrịta mmadụ na ibe ya. Ihe eji mara ha bụ uche ha, nkwanye ugwu maka omenaala ndị ọzọ na ile ọbịa nke ndị mba ọzọ. Na nkenke, ndị Australia na-ekpo ọkụ, na-akpachi anya ma nwee mmekọrịta.
Kedu ka esi ekele ke Australia?
Mgbe a na-ekwu maka etu esi ekele ekele n’Ọstrelia, anyị kwesịrị iburu n’uche ebe ihe ahụ merenụ nke malitere mkparịta ụka. N’ikwu ya n’ụzọ ọzọ, nzukọ ezumezu ma ọ bụ nke ndị enyi na-ezukọ na nzukọ nzukọ adịghị mma.
Iji maa atụ, ndị Ọstrelia n’etiti ndị enyi na-ekele ibe ha n’ụzọ na-egosi ịhụnanya: isutụ onwe ha ọnụ na ntì ma ọ bụ mmakụ aka dị nkenke. Ugbu a, ma ọ bụ nzukọ achụmnta ego ma ọ bụ nzukọ mahadum, ndị Ọstrelia jiri nkwanye ugwu na ekele onwe ha site na iji ịkụrụ aka na ọnụ ọchị.
Dịka omenala ndị Australia na dịka n'ọtụtụ mba ndị ọzọ, ekwesịrị ịkele ekele na mbido na ngwụcha nzukọ, yana ndị ọbịa ọ bụla nwere ike ịbịa n'oge nzukọ a.
Na mgbakwunye, ndị Australia na-akpọkarị ndị ọzọ na-eji aha ha eme ihe n ’nzukọ izizi ya mere na ọ dị mkpa ka ị buru aha ndị na-agwa gị okwu n’isi mgbe a kpọbatara gị. Ọ dịkwa mkpa ka anya na-ele gị mgbe ị na-ekele onye ahụ. Ihe a na-egosi na ị na-asọpụrụ mmadụ ma ọ na-egosikwa na ị na-ege onye ọzọ ntị ma na-ege ya ntị.
Kedu usoro eji eji ekele Australia?
G'day: Thedị ndebiri nke "daybọchị ọma" bụ usoro a na-ahụkarị na nkenke maka ekele mmadụ ma kpọọ ya "gidday." Enwere ike iji ya maka ehihie na abalị.
"Ow ya goin 'mate?": Ọ bụ usoro ndebiri nke ndị a maara nke ọma "Olee otu ị ga-esi lụọ di ma ọ bụ nwunye?" nke putara kedu ka isi eme.
"Cheerio": Ejiri iji kelee.
"Cya This Arvo": Dị ka ị ga-ahụ, ndị Australia nwere mmasị bebiri mkpụrụ okwu. Usoro a pụtara "Lee gị n'ehihie a." Ha na-eji okwu arvo mee ihe maka ehihie na ọnọdụ niile.
"Hooroo": Ọ pụtara na ị ga-ahụ mgbe e mesịrị.
"Toodle-oo": wayzọ ọzọ ị ga-esi gaa nke ọma.
"Morningtụtụ ọma nụ.
"Ezi ehihie": Ezi ehihie.
"Ezi mgbede": mgbede.
"Ka chi bọọ, Ka chi bọọ.
"Ọ dị mma izute gị": Ọ dị mma izute gị.
"Ọ dị mma ịhụ gị": Obi dị m ụtọ ịhụ gị.
Olee otú ihe ngosi dị?
Mgbe a bịara n'iwepụta ụmụ nwoke na ụmụ nwanyị n'ọnọdụ ebumpụta ụwa, a na-eji okwu ndị a "Señor", "Señora" na "Señorita" ịbụ "Maazị", "Oriakụ" na "Miss" ha iche okwu na Bekee.
Ọ bụrụ na ọ bụ nkwupụta nzuzo na-egosi n'etiti otu ndị enyi, enwere ike iji okwu ndị dị ka "Nke a bụ enyi m Peter" (ọ bụ enyi m Peter) ma ọ bụ "Nke a bụ onye ọrụ ibe m Ann" (ọ bụ Ana, onye ọrụ ibe m) nwere ike iji .
Kedu ka ndị Australia si ekele ibe ha na nnọkọ oriri na ọ ?ụ ?ụ?
Nwere ike iji usoro ọ bụla m gosipụtara na paragraf ndị gara aga. Agbanyeghị, ekwesiri iburu n'uche na ọ bụrụ na a kpọọ gị na nnọkọ oriri ma ọ bụ mmanya, ọ bụ omenala gị iweta ihe ị ga-a drinkụ (dịka ọmụmaatụ biya, mmanya ma ọ bụ mmanya dị nro) maka ọ ofụ nke otu na nke gị.
Ọzọkwa, n’Australia a na-ahụta omume ọma ịkpọtụrụ onye ọbịa nke nnọkọ ahụ iji hụ ma ha chọrọ ma ọ bụ chọọ ka iweta ihe ọ bụla ọzọ. N’aka nke ọzọ, ọ bụrụ na a kpọọ gị oriri n’ụlọ mmadụ, ọ bụ omenala iwere onye a kpọrọ oriri onyinye mgbe ị bịarutere, dị ka okooko osisi mara mma, igbe chọkọletị ma ọ bụ karama mmanya.
Otherzọ ndị ọzọ ị ga-eji kelee mba Commonwealth
Commonwealth bụ ọgbakọ afọ ofufo nke ihe karịrị mba iri ise nwere njikọ ọdịnala, akụkọ ihe mere eme na ọdịbendị, ọtụtụ n'ime ha bụ asụsụ Bekee.
Ọ bụ ezie na mba ọ bụla nwere usoro ndọrọ ndọrọ ọchịchị nke ha ma nweere onwe ha, ụfọdụ dịka Australia ma ọ bụ Canada na-aga n'ihu na-enwe njikọ na ọchịchị ndị Britain. Yabụ kedu ka isi ekene na mba ndị otu Commonwealth dịka Canada ma ọ bụ England?
Ndị Canada bụ otu n'ime ndị kacha bụrụ enyi n'ụwa, nke na-apụta n'ime ekele ha na-eso ndị ọzọ emekọ.
Iji maa atụ, na Quebec ekele a na-ejikarị eme ihe bụ "Bonjour" na "Ça va?" mgbe na Maritimes ndị mmadụ na-eji ekele dị mfe "Ndewo" ma ọ bụ "Ndewo" na-esote enyi "How ya 'doin'? N'aka nke ọzọ, Ontario na Toronto jikwa usoro ndị yiri ya.
A na - ekwu na Alberta na Saskatchewan bụ ebe ndị kacha nwee enyi na mba ahụ bi na ị ga - ahụ mgbe niile ndị dị njikere ịkparịta ụka n’adịghị ka obodo ukwu ndị mmadụ na - agbakarị ọsọ.
Zọ kachasị esi asụ bekee n’ekele ibe ya bụ okwukwe aka Ọ bụ ihe a na-ahụkarị itinye ya n'ọrụ mgbe a kpọbatara mmadụ onye ọzọ ma ọ bụ tupu ịmalite nzukọ na azụmahịa.
Ọ na-abụkarị naanị iji nsusu ọnụ kelee gị naanị mgbe ndị na-agwa gị okwu bụ ndị enyi ma ọ bụ ndị ọ maara nke ọma na enwere ịhụnanya dị n'etiti ha. N'adịghị ka mba dịka Spain, ọ bụghị ihe a na-ahụkarị iji nsusu ọnụ wee na-ekele mgbe niile.
Wayszọ ndị ọzọ iji ekele bụ:
"Ndewo ma ọ bụ Ndewo": Ọ pụtara "ndewo".
"Olee otu i si eme?": Ọ pụtara otú ị dị, a na-ekwukarị ya na ọnọdụ ndị a na-esonyere ya site na okwukwe aka.
"Kedu ka ị mere?": Ọ pụtakwara "kedu ka ị mere" mana ejiri ya n'ọnọdụ ndị ọzọ mara. A na azakarị ya "Enwere m ekele, ma gị?" nke putara "adi m mma, i meela, gi kwanu?"
"Ọ dị mma izute gị": Nkebi okwu a pụtara "ọ dị mma izute gị" ma na-ekwukarị ya mgbe ọ na-agbanye aka. A na-aza ya “dị mma izute gị” (ọ dịkwa mma izute gị) ma a na-ekwukarị ya mgbe ị na-aju aka.
«Obi dị m ụtọ izute gị»: Ọ bụ usoro ọzọ iji gosipụta na obi dị mmadụ ụtọ izute onye ọzọ. Iji zaa, “kwa” ka etinyere na ngwụcha ahịrịokwu ahụ dị ka nke gara aga.
Jiri ntuziaka ndị a dị n ’nzukọ gị n’ọdịnihu n’oké osimiri ma ị ga-ekele dịka ezigbo“ Aussie ”!
Pathzọ zuru ezu na edemede: Njem zuru oke » Imaara ka ndi Australia si ekele onwe ha
ndị nlekọta ahụ na-ekele ibe ha dịka nwoke nwere mmasị nwoke na inu ọkpọkọ ụmụ nwoke na ụmụ nwanyị na-achị ọchị ma na-achị ọchị nwoke nwere mmasị nwoke ma jide ịnyịnya ibu ha na nnụnnụ tit ha aka ịnyịnya ibu ha maka 3000 awa igbo onwe na njedebe nke shitdddddddddddddddaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa